I-Cottage e-Grove-Three Rooms - I-Airbnb
I-Cottage e-Grove-Three Rooms
Ikhaya elinokuthula elinokuhlobisa kanye nezinsiza zesimanje.Sihlala kule ndawo nezingane zethu zoboya ezi-3. UJasmine & Poppy noJack
Inketho yethu yamakamelo amathathu yigumbi leNdlovukazi eline-TV, ideski kanye nezihlalo. Igumbi eliphindwe kabili lilingana nomuntu oyedwa noma abangu-2, elakhelwe ngezingubo, amatafula aseceleni nokukhanya kombhede, i-adaptha yokushajwa kabusha.
Igumbi lokulala elinamawele liyigumbi elijwayelekile, imibhede emi-2 yenkosi eyodwa, eyakhiwe ngezingubo, ideski nesitulo.
Igumbi lokugeza elazivakashi kuphela
Ngesicelo- umbhede ogoqiwe uyimali yomuntu eyengeziwe $35 ingabamba imibhede yamafolda emi-2 ekamelweni lendlovukazi
Izivakashi ziphawule ukuthi ziyalithanda ikhaya lethu ngenxa yendawo ethulile necezile yezingadi zethu ezinhle. Ikhishi lesimanje lalisiza ekuphekeni ukudla kalula.
Sihlala endaweni endaweni ethule, ikhaya lethu lizungezwe izingadi ezinhle zekotishi ezingajatshulelwa isivakashi. Ukusuka engadini yethu yeZen ukuya endaweni yokudlela yangaphandle kanye nezindawo ze-bbq.
Uma unentshisekelo kuma-orchid umyeni wami u-Peter uzokukhombisa uthando lwakhe ngalezi zimbali ezimangalisayo, nakuba ziqhakaza kanye ngonyaka ngethemba lokuthi ulapha ngesikhathi esifanele.
Sinezindawo zokuhlala eziningi isivakashi esingazisebenzisa
Inepaki nenkundla yokudlala ekugcineni komgwaqo wethu
Izingane zingaletha amabhayisikili azo noma ama-skateboard azodlala ku-Skate Park
Ngiyathanda ukuzijabulisa nezivakashi kodwa ngibuye ngizinikeze indawo uma zithanda. Ngiyazazi izindawo zethu ezikhangayo zasendaweni ngakho ngilapha ukuze ngikusize ngohambo lwakho